थाहा छ ? शरीरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला हुन्छन् असाध्यै भा’ग्यमा’नी” – Sudur Samaj
थाहा छ ? शरीरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला हुन्छन् असाध्यै भा’ग्यमा’नी”
कपाल– ज्योतिष शास्त्रका अनुसार लामो कपाल भएका महिलाहरुले जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्ने र परिवारलाई सुखी र खुशी राख्न सक्छन्। हात– शरीरको दुईवटै हात लामो भएका महिलाहरुलाई जीवनमा ठूलो यसआराम मिल्नुको साथै असल जीवनसाथी मिल्ने गर्छ।
खुट्टा– ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार लामो खुट्टा भएका महिलाहरु जीवनमा प्रशस्त धन लाभ गर्न सक्नेछन् । नाई टो– ठूलो वा ग हिरो नाई टो भएका महिलाहरुले पनि जीवनमा अत्यधिक धन लाभ गर्ने र जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्छन् ।
अप्रिल फुल’मा मान्छे ढा’ट्ने १० तरिकाहरु भिडियोमा हेर्नुहोस् !!
१९ वर्षको उमेरमा, इन्टरनेटमा धेरै महिलाको चासोको विषय यौ”न हुने अध्ययन”